၄၉ လက်မ display ကွေး၊ resolution အမြင့်တွေနဲ့ Asus ရဲ့ ဂိမ်းမော်နီတာအသစ် – DigitalTimes.com.mm
admin Jun 04, 2018
ဂိမ်းကစားတဲ့အခါ တစ်ချို့တီဗီတွေထက်ကို ပိုကြီးတဲ့ ဂိမ်းမော်နီတာကြီးနဲ့ဆော့ဖို့ စိတ်ကူးမယဉ်ကြည့်မိဘူးလား?? ဒီအတွက် Asus ကနေ ရွေးချယ်စရာတစ်ခု ထပ်တိုးလာခဲ့ပြန်ပါပြီ။
တနင်္လာနေ့ တိုင်ပေမှာကျင်းပခဲ့တဲ့ Computex မှာ Asus က ၄၉လက်မ display အကွေးနဲ့ Asus VG49V ကိုမိတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်။ TV လောကမှာတော့ သာမန်တီဗီဆိုဒ်လောက်လို့ပြောလို့ရပေမယ့် ဂိမ်းမော်နီတာလောကမှာတော့ တော်တော်ကြီး တော်တော်မိုက်တဲ့ display လို့ပြောရမှာပါ။
ဒီဂိမ်းမော်နီတာရဲ့ resolution ကတော့ 3,840 x 1,080-pixel resolution ရှိပြီး ပုံမှန် 1,920 x 1,080 pixel Full HD display တွေထက် ၂ဆပိုကျယ်တဲ့အတွက် Asus ကတော့ Double Full HD မော်ဒယ်လို့ခေါ်ထားပါတယ်။
ဒီလောက် pixel-resolution အပြင် refresh rate ကလည်း 144Hz တောင်ရှိပါတယ်။ screen မှာ ထစ်ပြီး ၂ပိုင်းပြတ်သွားတာမျိုးတွေမရှိရအောင် AMD ရဲ့ FreeSync နည်းပညာကိုလည်း သုံးပေးထားပါတယ်။
ဒီပွဲမှာ Asus က မော်နီတာတင်မဟုတ်ဘဲ console ဂိမ်းဆော့တဲ့သူတွေအတွက် CG32UQ နဲ့ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်တွေအတွက် ProArt PA34V ကိုလည်း မိတ်ဆက်ခဲ့ပါသေးတယ်။
ProArt ကတော့ နာမည်အတိုင်း ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အနုပညာသမားတွေအတွက်ကော ဂိမ်းသမားတွေအတွက်ပါ အဆင်ပြေစေမယ့် မော်နီတာပါ။ 21:9 ratio ရှိတဲ့ ၃၄ လက်မ မျက်နှာပြင်နဲ့ resolution ကတော့ 3,440 x 1,440 pixel ရှိပါတယ်။ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အနုပညာသမားတွေအတွက်လို့ ပြောရခြင်းက သူ့မှာ အရောင်ကွဲပမာတွေ အများကြီးပါဝင်တဲ့အတွက်ပါ။ (color-differentiation အရမ်းများပါတယ်)
ဒီ ProArt မှာတော့ DisplayPort 1.2 တစ်ပေါက် HDMI 2.0 ၂ပေါက်နဲ့ Thunderbolt3USB-C ပေါက် ၃ပေါက်ပါဝင်မှာဖြစ်ပြီး bandwidth ပမာဏကတော့ 40Gbps ထိတောင် ထောက်ပံ့ပေးနိုင်ပါတယ်။
သူကလည်း gaming panel တစ်ခုလို့ Asus က ဆိုထားပါတယ်။ ၃၁.၅လက်မရှိပြီး resolution ကတော့ 3,840 x 2,160 pixel ရှိတဲ့ 4K resolution နဲ့ပါ။ သူ့ကိုတော့ PlayStation4Pro, Xbox One X တွေနဲ့ 4K output ထုတ်ပေးနိုင်တဲ့ ဘယ် console တွေနဲ့မဆို သုံးလို့ရနိုင်ပါတယ်။
TV တွေအတွက် HDR10 (High-dynamic စံနှုန်း) ကို ဒီဂိမ်းမော်နီတာတွေမှာလည်း ခံစားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
တီဗီတွေလို ဆိုဒ်ကြီးကြီး resolution မြင့်မြင့် display တွေနဲ့ ဂိမ်းဆော့ချင်ရင်တော့ Asus ရဲ့ဂိမ်းမော်နီတာတွေကို ထည့်စဉ်းစားရတော့မှာပေါ့…
Ref: CNET.com, Asus
ဂိမျးကစားတဲ့အခါ တဈခြို့တီဗီတှထေကျကို ပိုကွီးတဲ့ ဂိမျးမျောနီတာကွီးနဲ့ဆော့ဖို့ စိတျကူးမယဉျကွညျ့မိဘူးလား?? ဒီအတှကျ Asus ကနေ ရှေးခယျြစရာတဈခု ထပျတိုးလာခဲ့ပွနျပါပွီ။
တနင်ျလာနေ့ တိုငျပမှောကငျြးပခဲ့တဲ့ Computex မှာ Asus က ၄၉လကျမ display အကှေးနဲ့ Asus VG49V ကိုမိတျဆကျလိုကျပါတယျ။ TV လောကမှာတော့ သာမနျတီဗီဆိုဒျလောကျလို့ပွောလို့ရပမေယျ့ ဂိမျးမျောနီတာလောကမှာတော့ တျောတျောကွီး တျောတျောမိုကျတဲ့ display လို့ပွောရမှာပါ။
ဒီဂိမျးမျောနီတာရဲ့ resolution ကတော့ 3,840 x 1,080-pixel resolution ရှိပွီး ပုံမှနျ 1,920 x 1,080 pixel Full HD display တှထေကျ ၂ဆပိုကယျြတဲ့အတှကျ Asus ကတော့ Double Full HD မျောဒယျလို့ချေါထားပါတယျ။
ဒီလောကျ pixel-resolution အပွငျ refresh rate ကလညျး 144Hz တောငျရှိပါတယျ။ screen မှာ ထဈပွီး ၂ပိုငျးပွတျသှားတာမြိုးတှမေရှိရအောငျ AMD ရဲ့ FreeSync နညျးပညာကိုလညျး သုံးပေးထားပါတယျ။
ဒီပှဲမှာ Asus က မျောနီတာတငျမဟုတျဘဲ console ဂိမျးဆော့တဲ့သူတှအေတှကျ CG32UQ နဲ့ ပရျောဖကျရှငျနယျတှအေတှကျ ProArt PA34V ကိုလညျး မိတျဆကျခဲ့ပါသေးတယျ။
ProArt ကတော့ နာမညျအတိုငျး ပရျောဖကျရှငျနယျအနုပညာသမားတှအေတှကျကော ဂိမျးသမားတှအေတှကျပါ အဆငျပွစေမေယျ့ မျောနီတာပါ။ 21:9 ratio ရှိတဲ့ ၃၄ လကျမ မကျြနှာပွငျနဲ့ resolution ကတော့ 3,440 x 1,440 pixel ရှိပါတယျ။ ပရျောဖကျရှငျနယျအနုပညာသမားတှအေတှကျလို့ ပွောရခွငျးက သူ့မှာ အရောငျကှဲပမာတှေ အမြားကွီးပါဝငျတဲ့အတှကျပါ။
ဒီ ProArt မှာတော့ DisplayPort 1.2 တဈပေါကျ HDMI 2.0 ၂ပေါကျနဲ့ Thunderbolt3USB-C ပေါကျ ၃ပေါကျပါဝငျမှာဖွဈပွီး bandwidth ပမာဏကတော့ 40Gbps ထိတောငျ ထောကျပံ့ပေးနိုငျပါတယျ။
သူကလညျး gaming panel တဈခုလို့ Asus က ဆိုထားပါတယျ။ ၃၁.၅လကျမရှိပွီး resolution ကတော့ 3,840 x 2,160 pixel ရှိတဲ့ 4K resolution နဲ့ပါ။ သူ့ကိုတော့ PlayStation4Pro, Xbox One X တှနေဲ့ 4K output ထုတျပေးနိုငျတဲ့ ဘယျ console တှနေဲ့မဆို သုံးလို့ရနိုငျပါတယျ။
TV တှအေတှကျ HDR10 (High-dynamic စံနှုနျး) ကို ဒီဂိမျးမျောနီတာတှမှောလညျး ခံစားနိုငျမှာဖွဈပါတယျ။
တီဗီတှလေို ဆိုဒျကွီးကွီး resolution မွငျ့မွငျ့ display တှနေဲ့ ဂိမျးဆော့ခငျြရငျတော့ Asus ရဲ့ဂိမျးမျောနီတာတှကေို ထညျ့စဉျးစားရတော့မှာပေါ့…
GitHub ကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်တော့မယ့် Microsoft